Ho an'ny finday
Ho an'ny Nintendo
Ho an'ny PC
Ho an'ny Playstation
Ho an'ny Xbox
Xbox 360 mitantana majika mpampiasa fampiantranoana majika nivadika ho totozy Windows
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-13
Anisan'ireo lalao lalao, Microsoft Xbox series accessories no tsara indrindra ho an'ny Windows fanohanana. Ny rafitra miasa mahazatra Windows 10 amin'izao fotoana izao dia afaka mametraka sarintany ny atin'ny mpampiantrano amin'ny solosaina, ary ny mpandrindra Xbox One dia afaka mifandray tsy tapaka amin'ny Windows ihany koa. Tsy vitan'izany fa nanampy ny hetaheta ...
Ahoana ny fampiasana Contrôleur amin'ny finday Ahoana no fananganana mpanaraha-maso lalao finday
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-05
Voalohany indrindra, mila mahatakatra ny tahony isika. Ny tahony dia vokatry ny lalao iray. Ny fihetsiketsehana sy ny fihetsik'ireo mpilalao lalao dia fehezin'ny bokotra sy fifaliana ao am-pelatanany. Ny fizarana dia azo zaraina amin'ny karazany maro, ohatra, misy ny telefaona finday, lalao ho an'ny lalao, ...
Inona avy ireo singa fototra amin'ny gamepad?
Lakilasy zana-tsipìka Ny D-Pad angamba no fanavaozana malaza indrindra an'i Nintendo amin'ny gamepads. Ny fisian'ny lakilen'ny zana-tsipika dia azo zahana amin'ny gamepad rehetra ankehitriny. Tsangambato analog Tamin'ny volana Jona 1996, Nintendo, izay namorona ny lakilen'ny lakilasy sy ny lakilen'ny L / R, dia nanampy hevitra vaovao ho an'ny mpanera: ...
Ny gamepad dia manana fomba fifandraisana tsy misy tariby
Fa ho an'ireo tahony namboarina ho an'ny lalao finday dia misy tsy fitoviana amin'ny fomba fifandraisana. Andao hojerentsika akaiky hoe inona ny fomba fampifandraisana ampiasain'ny mpanara-maso tsy misy mpampita mahazatra. 1.Ny teknolojia Bluetooth Bluetooth dia noforonin'ny goavambe telecommunication Erics ...
Ny tantaran'ny mpanara-maso lalao
Tantaran'ny fampandrosoana hatramin'ny nivoahan'ny mangina tamin'ny lalao informatika tany am-piandohan'ny taona 1990, dia niteraka olana ny toe-javatra folo taona. Ireo mpankafy PC malaza dia manana fotoana tena mety hijerena an'ity saha feno trangan-javatra ara-barotra sy maharitra ity. Ireo mpampiasa PC efa zokinjokiny manana tantaram-piainana efa folo taona mahery ...
Ny mpilalao vaovao dia mila mitandrina rehefa mividy gamepad!
Mahatsapa Tanana tsara dia tokony ho noforonina ergonomika, ahazoana aina amin'ny tanana, antonony ny lanjany, mety amin'ny fampiasana maharitra, ary afaka mitazona fihazonana maharitra na dia mamontsina aza ny tanana. Ny lalao tantana miaraka amin'ny fahombiazan'ny asa tsara dia mandray endrika ergonomika, ny boribory boribory amin'ny andaniny roa fi ...
Inona ny fanasokajiana sy fampidirana gamepads
wii mpandrindra Ny mpampiantrano Wii dia mandray fomba fiasa vaovao. Ny fifindrana amin'ny asa 2D nentim-paharazana mankany amin'ny asa 3D dia mahatonga ny fiasan'ny lalao ho maro karazana kokoa, ary koa io dia manohana ny fiasan-tsoratry ny style GameCube. Ny tahony dia manana asa maro samy hafa, ary azo ampiasaina ho ...
Ahoana ny fomba hisafidianana gamepad mety aminao
Safidio ny tantana mety aminao. Raha gamer ianao, dia mety ho azonao tsara kokoa ny zavatra lehibe iraisana toy ny carte graphique, CPU ary motherboard, fa maro amin'izy ireo no tsy dia mahazatra loatra ny mpanara-maso. Raha ny marina dia maro ny zavatra mila dinihina. Raha tena te ...
Aorian'ny fampitahana tsara dia azonao atao ny mahatakatra ny tombony azo avy amin'ny gamepad afovoany farany ambony
Na izany aza, ny feon'ny bokotra mafy kokoa dia ny fehin'i Beitong Zeus. Izany dia noho ny fampiasana bokotra mekanika indrindra, indrindra raha ny feo miiba, ny silaka poti ary ny jiro hikasika ny maivana dia hampanakoako feo mazava. Ny fotokevitra dia mitovy amin'ny an'ny fitendry keyboard. Raha toa ianao ka ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-05-11
Ny mpandrindra Xbox One (indraindray antsoina hoe mpanaraha-maso tsy misy tariby amin'ny Xbox One) no mpanara-maso lalao ao amin'ny konsolin'ny lalao video Xbox One sy Xbox series X an-trano. Natao varotra ihany koa izy io hampiasaina amin'ny solosaina miankina amin'ny Windows ary mifanaraka amin'ny hafa Ny rafitra fandidiana dia compat ...
Hatramin'ny fiakaran'ny fahanginan'ny lalao informatika tamin'ny fiandohan'ny taona 1990, dia niteraka ny toe-javatra folo taona. Ireo mpankafy PC malaza dia manana fotoana tena mety hijerena an'ity saha feno trangan-javatra ara-barotra sy maharitra ity. Ireo mpampiasa PC efa zokinjokiny manana tantara efa mihoatra ny folo taona dia mety mbola misy fres ...
Xbox lalao mpanara-maso izay afaka mamerina ny tena seho
Tian'ireo mpilalao ny milalao lalao, antony maro no ahafahana mametraka azy ireo amin'ny lalao, mankafy ny fientanam-po, amin'izay hampihena ny tsindry, fa olona maro no tsy manam-bola na fotoana ampy handraisana anjara amin'ilay lalao, ary avy eo misokatra ho an'ny besinimaro ianao afaka misafidy Contrôle de Xbox Game, izay ahafahanao misafidy ...
Adiresy:Room 2214, Fenlin International Building Longgang Avenue, Longgang, Shenzhen, Sina